> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Virtual digsi
Sidee baan ka Virtual Disk soo ceshano karaa Data
Waxaan leeyahay disk dalwaddii oo leh macluumaad qiimo on my computer, laakiin anigu ma aan heli kartaa tan iyo shalay. Ma suroobi karaa waddo si ay u helaan aan la taaban karin disk? Haddii aan, waa hab inuu ka soo kabsado xogta? Mahadsanid!
Waa adag tahay in la sheego in aad ka heli kartaa dalwaddii disk ama aan. Laakiin waxaa suurto gal ah inuu ka soo kabsado xogta ka dalwaddii disk haddii aan la overwritten by xog cusub on your computer ama drive dibadda adag.
Waxaa jira barnaamijyo kabashada xogta disk dalwaddii badan ee Internet-ka in ay awoodaan in ay dib u soo ceshano xogta aad. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac gabi ahaanba waa mid ka mid ah oo kugu haboon inta badan. No files arrinta ku saabsan dalwaddii disk lumeen ay sabab u tahay xijaab dhaawac, tirtirka xijaab iyo formatting xijaab, barnaamijkan si fudud iyaga hanan doonto. Iyadoo interface sahlan in la isticmaalo iyo user-friendly, waxaad soo kabsan karno faylasha sida videos, sawiro, files audio, waraaqaha iyo ka badan oo ka disk dalwaddii fudayd.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista dalwaddii disk si loo hubiyo sida badan oo files badiyay aad dalwaddii disk la soo kabsaday karo.
Qabtaan Virtual Disk Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Aynu qaadan Windows version of Wondershare Data Recovery sida isku day ah in ay dib u soo ceshano xogta ka dalwaddii disk. Users Mac karto howlaha la mid ah in la sameeyo dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada disk dalwaddii
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad yeelan doontaa siinayaa 3 kabashada hababka: Khasaaray File Recovery, Barzakh soo kabsadaan, Recovery File ceeriin ah.
Tan iyo dalwaddii disk waa sida xijaab on your computer, aynu dooran "kabashada ah Barzakh," mode si ay u bilaabaan.
Fiiro gaar ah: Haddii dalwaddii disk ayaa qarka u saaran ku ah drive dibadda adag, fadlan hubi in uu in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 2 Dooro dalwaddii disk in iskaan files waxa ku
Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan drive la taaban karo in aad dalwaddii disk waxa saaran oo guji "Next" button in ay sii wadaan.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan xijaab ee dalwaddii disk oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan u baar.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka dalwaddii disk
Marka scan la dhammeeyo, helay files aad dalwaddii disk oo dhan lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file si aad u hubiso in files aad u baahan tahay si aan la baxey karo ama.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan macluumaadka aad doonaysid in aad dib u hanato oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u sii on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday dib si aad u dalwaddii disk inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.